समुद्री मील र समुद्री चार्ट विकास
एक समुद्री मील नाविक र / या शिपिंग र विमानन मा नेविगेटर द्वारा पानी मा प्रयोग मापन को एक एकाइ हो। यो पृथ्वीको महान सर्कलमा एक मिनेट को एक औसत लम्बाई हो। एक न्युटिकल माइल एक मिनेटको अक्षांशसँग मेल खान्छ। यसकारण, अक्षांशको डिग्री लगभग 60 वटा समुद्री मीलहरू छन्। यसको विपरीत, आबादी को डिग्री को बीच समुद्री मील को दूरी स्थिर छैन किनकि देशान्तर को रेखाहरु एक साथ मिलन को रूप मा उनि ध्रुव मा कनवर्ट।
समुद्री मील सामान्यतया प्रतीक एनएम, एनएम वा एनएममी संग संक्षिप्त हुन्छ। उदाहरणको लागि, 60 एनएमले 60 वटा समुद्री मील को प्रतिनिधित्व गर्दछ। नेभिगेसन र उड्डयनमा प्रयोग गरिनुको साथै, समुद्री मीलले पनि ध्रुवीय अन्वेषण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र क्षेत्रीय जल सीमाको सन्दर्भमा सम्झौताहरू प्रयोग गरेका छन्।
समुद्री मील इतिहास
1929सम्म, समुद्री अन्तरको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दूरी वा परिभाषामा सहमत भएन। त्यस वर्षमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय असाधारण हाइड्रोग्राफिक सम्मेलन मोनाकोमा आयोजित भएको थियो र कन्फर्ममा आयोजित भयो, यो दृढता थियो कि अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री समुद्री विमान 6,076 फिट (1,852 मिटर) हुनेछ। हाल, यो व्यापक रूपमा प्रयोगमा मात्र एक परिभाषा हो र यो एक हो कि अन्तरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन र मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय ब्यूरो द्वारा स्वीकार गरिएको छ।
1929भन्दा अघि, विभिन्न देशहरू समुद्री मीलका विभिन्न परिभाषाहरू थिए।
उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य माप क्लार्क 1866 एलिप्सिड र ठूलो सर्कलमा एक मिनेटको आर्क लम्बाईमा आधारित थियो। यी गणनाहरूको साथ, एक समुद्री समुद्री 6080.20 फिट (1,853 मीटर) थियो। अमेरिका ले यो परिभाषा त्याग्यो र 1954 मा अन्तरराष्ट्रिय माइलको अन्तरराष्ट्रिय माप स्वीकार गर्यो।
युनाइटेड युनिभर्सिटीमा समुद्री समुद्री ढोकामा आधारित थियो। एक गाँट नौका जहाजबाट बुनिएको स्ट्रिङ टुक्रा टुक्रा टाँस्नुबाट व्युत्पन्न गतिको एक एकाइ हो। दिइएको समयको समयमा पानीमा खटाउने संख्याहरूको संख्या प्रति घन्ट प्रति घण्टा निर्धारण गर्दछ। गुटहरू प्रयोग गर्दै, यूकेले निर्धारित गरे कि एक गाँठो एक समुद्री मील थियो र एक नाथिक माइल 6,080 फिट (1853.18 मीटर) को प्रतिनिधित्व गर्दछ। 1970 मा, यूकेले समुद्री हवाईको यो परिभाषा त्याग्यो र अहिले यसको परिभाषाको रूपमा बिल्कुल 1,853 मिटर प्रयोग गर्दछ।
समुद्री मील प्रयोग गर्दै
आज, एक नैतिक माइल अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 1,852 मिटर (6,076 फिट) मा सहमत हुन्छ। न्युटिकल माइल बुझ्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवधारणाहरू मध्ये एक भए तापनि अक्षांशको सम्बन्ध हो। किनकी एक समुद्री मील पृथ्वी को परिमाण मा आधारित छ, एक समुद्री मील को गणना को समझने को एक आसान तरीका छ कि पृथ्वी को आधा मा कटौती कल्पना को छ। एकपटक काटेर, आधाको सर्कल 360 डिग्री को बराबर अंशमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यी डिग्रीहरू त्यसपछि 60 मिनेटमा विभाजित गर्न सकिन्छ। यी मध्ये एक मिनेट (वा आर्क को मिनेट को रूप मा उनि नेविगेशन मा भनिन्छ) पृथ्वी मा एक महान वृत्त संग एक नैतिक मील को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
प्रतिमा वा भूमि माइलका सर्तहरूमा, एक समुद्री मील 1.15 माइल को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
यो कारणले गर्दा अक्षांशको एक डिग्री लम्बाइमा लगभग 69 वटा स्थिर मील हो। त्यो माप 1/60 औं हुनेछ 1.15 कन्ट्युट माइल। अर्को उदाहरण भूमध्यमा भूमध्यमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, जसलाई 24,857 मील (40,003 किलोमिटर) यात्रा गर्नु पर्छ। जब समुद्री मीलमा रूपान्तरित हुन्छ, दूरी 21,600 एनएमएम हुनेछ।
नेभिगेसन प्रयोजनका लागि यसको प्रयोगको अतिरिक्त, समुद्री मीलहरू अझै पनि गतिको महत्त्वपूर्ण मार्कर हुन् जसका लागि "गाँठ" शब्द प्रति घण्टा एक नैतिक माइल को अर्थ प्रयोग गरिन्छ। यसैले यदि एक जहाज 10 गुना मा जान्छ, यो प्रति घण्टा 10 समुद्री मील मा चलिरहेको छ। जहाजको गति गेज गर्न आज लग प्रयोग गर्नाले शब्द (अघिल्लो जहाजमा बाँधिएको एक बुटिएको रस्सी) को प्रयोग गरी अघि उल्लेख गरिएको अभ्यासबाट व्युत्पन्न गरिन्छ। यो गर्न को लागि, लग पानी मा फेंक दिए र जहाज पछि पलट जाएगा।
जहाजको र निश्चित समयको समयमा पानीबाट निस्किएको घन्टहरूको संख्या गिन्नेछ र संख्याले "गोरखा" मा निर्धारित गति गिनएको छ, तथापि-दिनको गाईको माप अधिक टेक्निकलली उन्नत तरिकाहरूसँग निर्धारण गरिन्छ। तथापि, को रूप मा यांत्रिक यांत्रिक, डप्प्लर रडार , र / या जीपीएस को रूप मा।
किनभने समुद्री मीलसँग निरन्तरताको रेखाहरू निरन्तर माप छ किनभने तिनीहरू नेभिगेशनमा अत्यन्त उपयोगी छन्। नेभिगेसन सजिलो बनाउन, नाविक र aviators ले समुद्री चार्टहरू विकसित गरेको छ जुन पानीको क्षेत्रमा केन्द्रित ग्राफिकल प्रतिनिधित्वको रूपमा सेवा गर्दछ। अधिकांश नटटिक चार्टहरूले खुला समुद्र, coastlines, नेभिगेबल इनल्याण्ड जल र नहर प्रणालीहरूमा जानकारी समावेश गर्दछ।
सामान्यतया, समुद्री चार्टहरूले तीन नक्शा प्रक्षेपण मध्ये एक प्रयोग गर्दछ : गनोमिक, पालोकोनिक र मर्टेटर। Mercator प्रक्षेपण यी तीन भन्दा धेरै सामान्य हो किनभने, अक्षांशको रेखा र अक्षांशको रेखा आयताकार ग्रिड बनाउन दायाँ कोणहरूमा क्रस। यस ग्रिडमा, अक्षांश र देशान्तरको सीधा रेखाहरू सिधा रेखा पाठ्यक्रमहरूको रूपमा काम गर्दछ र सजिलैसँग नेभिगेबल मार्गहरूको रूपमा पानीबाट प्लट गर्न सकिन्छ। समुद्री मील को अतिरिक्त र एक मिनेट को अक्षांश को प्रतिनिधित्व को खुले पानी मा अपेक्षाकृत आसान बनािन्छ, यसैले यसलाई अन्वेषण, शिपिंग, र भूगोल को एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक बनाइन्छ।
बच्चाहरु को लागि भूगोल
खगोल विज्ञानमा क्रांति के हो?
'सुन्दर र डम्प्ड' उद्धरण
भाषण र लेखनमा निष्ठा
लाइफ को गुआयन "गाइ" ब्लुफर्ड: नासा एस्ट्रोनट
भौतिकी मा प्रेरणा परिभाषा
ई बी व्हाइट 'रिंग टाइम' को बयान विश्लेषण
कसरी फ्रान्सेलीमा "इन्टरर" (इन्टर गर्न) कन्जगेट गर्नुहोस्
एडिडास को उत्पत्ति को एक त्वरित इतिहास
पूर्वी क्यारोलिना विश्वविद्यालय जीपीए, एसएट र एक्ट डेटा
Pitbull's Best Dance Dance
शीर्ष माइक + '80s को मैकेनिक्स गाने
मिन्यूट Chrétien फ्रांसीसी क्रिसमस क्यारोल ओ हे पाल्तु राई
टम थम्ब स्टीम इञ्जिनको इतिहास र पीटर कूपर
एक उष्णकटिबंधीय माछा आकर्षित गर्नुहोस् - कार्टून कसरी आकर्षित गर्ने
विश्व युद्धमा महिलाहरु: सामाजिक प्रभाव
'किन म एक पत्नी चाहनुहुन्छ' प्रश्नोत्तरी पढ्दा जुडी ब्राडी
म कसरी शैतानमा परिवर्तन गर्छु?
तपाईंको लेखनको लागि शक्तिशाली शब्दहरू
कस्ता टायरहरू बनाइएका छन्
बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रवेश
नेपोलियन युद्ध: युद्ध को फ्रिडल्याण्ड